Global Voices teny Malagasy » Côte d’Ivoire : Sehona habibiana ao amin’ny fonja be gadra indrindra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Janoary 2011 3:48 GMT 1	 · Mpanoratra Julie Owono Nandika Candy
Sokajy: Afrika Mainty, Cote d'Ivoire, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Politika, Zon'olombelona
Misy video mampikorontana ny fiaraha-monina Ivoriana amin'ny aterineto amin'izao fotoana izao. Ahitàna ny miaramila midaroka gadra ao amin'ny fonja “Maison d'Arrêt et de Correction” (MACA) izany. Araka ilay olona namoaka ny video, mpomba an'i Alassane Ouattara  ireo gadra ireo. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny krizy ara-politia any Cote d'Ivoire, am-polony ireo olona nosamborina tany Abidjan noho ny fironany ara-politika, ary nogadraina ao amin'ny MACA.
Tamin'ny 10 Desambra, Jean-Paul Ney, mpanao gazety Frantsay nampangain'i Laurent Gbagbo ho nikasa hanongam-panjakàna tamin'ny Desambra 2007, dia namoaka tao amin'ny vohikalany “Les grandes oreilles “, video  iray nalaina tamin'ny 2008 fony izy notànana tany amin'ny MACA.
Tamin'ny 17 Desambra 2010, ny andro taorian'ny vono olona nitranga nandritra ny fihetsiketsehana  nataon'ireo mpomba an'i Ouattara tany Abdijan, mbola ilay mpanao gazety ihany no niantso ny olona tao amin'ny kaontiny twitter  mba hanampy ireo gadra ao amin'ny MACA:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/01/08/11815/
 vono olona nitranga nandritra ny fihetsiketsehana: https://globalvoicesonline.org/2010/12/20/cote-divoire-ivorian-internet-users-fear-a-new-era-of-terror-in-abidjan/